Akụkọ ihe mere eme nke ụwa: mmalite, nhazi na geology | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 30/08/2021 15:51 | Geology
Ụwa anyị dị ka anyị si mara ya taa dị nnọọ iche na nke ọ dị obere oge a mụsịrị ya. A na -eme atụmatụ Planet Earth afọ 4.470 ijeri. N'oge ahụ, ọ bụ naanị mwakpo nke okwute nke ime ya kpụ ọkụ n'ọnụ wee mechaa gbazee ụwa niile. Ka oge na -aga, ogbugbo ahụ akpọnwụwo ruo mgbe o siri ike. N'akụkụ ala, ọ ga -ekwe omume ịkpakọba mmiri ebe, n'elu elu ala nke ụwa, e guzobere usoro ikuku nke na -ebute ikuku. Ndị akụkọ ụwa ọ bụ akụkụ na -adọrọ mmasị nke anyị ga -amatarịrị.
Yabụ, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara akụkọ ụwa na nke kacha mkpa.
1 Mmalite nke mbara ala
2 Nhazi nke Anyanwụ na mbara ala
3 Akụkọ ụwa
4 Akụkọ ihe mere eme nke ụwa
Mmalite nke mbara ala
Ụwa anyị abụghị ihe ọzọ karịa otu nnukwu okwute kpụ ọkụ n'ọnụ n'ime na n'èzí na -emepụta ikuku ikuku nke mepụtara ikuku. A ga -amararịrị na ihe mejupụtara ikuku amalitela kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ na -adị ugbu a. Mmiri, ụwa na ikuku bidoro na -emekọrịta ihe n'ike ruo mgbe lava sitere n'ime ala wepụtara n'ụba site na ọtụtụ mgbawa dị na jikọrọ ọnụ ụwa. Emere nke a niile site n'ịgbanwe onwe ya n'ihi ọrụ mgbawa ugwu.
Dabere na ndị sayensị na ọmụmụ ha, ihe dị ka ijeri afọ 13.800 gara aga, enwere nnukwu mgbawa nke a maara dị ka Big Bang. Ike ewepụtara na oke ọsọ ọsọ, dị ka ọsọ ọkụ, kpaliri okwu a dị oke egwu n'akụkụ niile. Ka oge na -aga, ka ha na -aga n'ihu site na etiti wee na -akwụsịlata, nnukwu ihe na -achịkọta ma tụba n'ime ụyọkọ kpakpando ndị ọzọ.
Anyị amaghị ihe mere na mbara igwe nke anyị nọ n'ime ya afọ ijeri itoolu mbụ; ọ bụrụ na enwere anwụ ndị ọzọ, mbara ala ndị ọzọ, oghere efu, ma ọ bụ ihe ọ bụla. N'etiti etiti oge a, ma ọ bụ ikekwe na mbụ, ọ ga -abụrịrị na e guzobere ụyọkọ kpakpando.
Nhazi nke Anyanwụ na mbara ala
Na nsọtụ ụyọkọ kpakpando a, nke anyị na -akpọ ugbu a Milky Way, ihe dị ka ijeri afọ ise gara aga, ụfọdụ n'ime okwu ahụ gbakwunyere n'igwe ojii. Ọnọdụ a emeela n'ọtụtụ ebe, mana anyị nwere mmasị na nke a.
Ekwenyere na kpakpando dị nso gbawara wee gaa supernova ihe dị ka ijeri afọ 4.600 gara aga. Ebili mmiri nke ihe mgbawa ahụ kpatara mere ka ihe ahụ dị na nebula anyanwụ anyị nke mbụ malite ịga. Thegwé ojii ahụ malitere ịkpa ngwa ngwa wee felata n'ime diski. Nnukwu ike ndọda na -achịkọta ihe ka ukwuu n'ime nnukwu okirikiri, na gburugburu ya obere igwe na -agbagharị. Nnukwu etiti na -aghọ okirikiri ọkụ, kpakpando, anyanwụ anyị.
Obere ìgwè ndị a na -agbakọkwa mgbe ha na -agba anyanwụ gburugburu, na -eme mbara ala na ụfọdụ ọnwa. N'etiti ha, enwere opekata mpe ọfụma na nha dabara adaba iji dobe mmiri ahụ ka ọ bụrụ mmiri mmiri wee debe envelopu dị mkpa. Dị ka o kwesịrị ịdị, mbara ala a bụ nke anyị, ụwa.
Mgbe ọkwa mbụ nke ụwa ghọrọ ihe na -ekpo ọkụ, mpụta nke elu malitere sie ike, mana okpomọkụ si n'ime ya gbazekwara ha ọzọ. N'ikpeazụ, ọ̀tụ̀tụ̀ ịjụ oyi ya dara nke ọma iji mee ka o nwee anụ siri ike.
Na mbụ, ụwa enweghị ikuku, ọ bụ ya mere meteorites ji kụọ ya. Ọrụ mgbawa ugwu na -eme ihe ike, a na -achụpụkwa nnukwu ọkụ na -ekpo ọkụ. Ka eriri ahụ na -ajụ oyi ma na -esiwanye ike, ọkpụrụkpụ nke eriri ahụ ji nwayọọ nwayọọ na -abawanye.
Ọrụ a na -agbọpụta ọkụ na -emepụta nnukwu gas, nke na -emecha mee akwa n'ime ala. Ihe mejupụtara ya dị iche na nke ugbu a, mana ọ bụ akwa nchekwa mbụ na -enye ohere ka mmiri mmiri pụta. Ụfọdụ ndị edemede na -ezo aka na "ikuku I" dịka Ikuku mbụ nke ụwa mejupụtara hydrogen na helium, nke nwere ụfọdụ methane, amonia, gas na -adịghị ahụkebe, na obere ma ọ bụ enweghị oxygen.
N'ime mgbawa ugwu, ikuku oxygen na hydrogen na -emepụta vepo mmiri, nke na -agbado na mmiri ozuzo mbụ mgbe ọ na -abata na mbara ikuku. Ka oge na -aga, ka nchara ụwa na -ajụ oyi, mmiri sitere na mmiri ozuzo nwere ike na -adị mmiri mmiri n'ime ala dị omimi nke ụwa, na -eme oke osimiri, hydrosphere.
Site ebe a, paleontology na -ekwu maka ọmụmụ gbasara akụkọ ala, na paleontology bụ ọkachamara n'ịmụ akụkọ ihe mere eme nke ụwa.
Akụkọ ihe mere eme nke ụwa
N'ime nyocha iji chọpụta ma ghọta akụkọ ihe mere eme nke ụwa, a na -enweta data na ihe ngosi site n'ụdị nkume anọ. A na -emepụta ụdị nkume ọ bụla site n'ụdị ọrụ dị iche iche n'ime ala ụwa:
Mbibi na ụgbọ njem na -eme ka ntinye akwụkwọ na -esote wee mepụta akwa na -aga n'ihu nke okwute sedimentary nchịkọta na lithification.
A na -ewepụta Lava n'ime ụlọ miri emi magma wee na -ajụkwa oyi n'elu elu ụwa ka ọ bụrụ nkume mgbawa.
Ọdịdị mbara ala nke etinyere na okwute ndị dị ugbu a, nke mebiri nrụrụ dị iche iche.
Omume plutonic ma ọ bụ nke na -eme anwansi nke na -eme n'ime ụwa na ha nwere mmetụta na mba ofesi.
Nkewa nke akpịrịkpa oge ala na akụkọ ihe mere eme nke ụwa dabere na mgbanwe n'ụdị fosil na ihe ndị ọzọ achọtara na eriri na -aga n'ihu. Agbanyeghị, afọ 447 ruo afọ 540 mbụ nke njupụta nke ụwa ka edere n'ime okwute nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị ọkpụkpụ, ya bụ, Naanị fosilị dabara adaba dị kemgbe nde afọ 540 gara aga.
Maka nke a, ndị ọkà mmụta sayensị kewara oke akụkọ ihe mere eme nke ụwa n'ime oge abụọ: Precambrian, nke gụnyere Subzoic, Paleophonic, na Proterozoic, na Phanerozoic, nke bụ afọ fosil nke oge ahụ wee rute n'eziokwu.
Nchọpụta redioaktivu nyere ndị ọkà mmụta ala na ndị ọkà mmụta ihe ọmụmụ narị afọ nke XNUMX aka ịchepụta ụzọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nke nwere ike ikenye afọ zuru oke (n'ime nde afọ) na oge.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara akụkọ ụwa na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Akụkọ ụwa
Kedu ihe bụ ọnwa